कांग्रेसको जागरण अभियान : भ्रदगोल टाल्न कि संगठन जगाउन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कांग्रेसको जागरण अभियान : भ्रदगोल टाल्न कि संगठन जगाउन ?
भदौ २५ गते, २०७६ - १४:५६
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा जुटेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको दोस्रो चरणको जागरण अभियान आगामी असोज ७ गतेसम्म चल्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको यसपालिको जागरण अभियानका लागि कांग्रेसका नेताहरु अहिले जिल्ला जिल्लामा गईसकेका छन् ।
कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियानलाई पार्टी संगठन जगाउने र सरकारविरुद्धको भण्डाफोर अभियान चाल्ने पनि भनेको छ । कांग्रेसले बढ्दो महंगी र भ्रष्टाचारलाई पनि अभियानको मुद्दा बनाएको छ ।
भ्रदगोल संगठन, निराश नेता कार्यकर्ता
कांग्रेसका १३ भातृ संगठनमध्ये अधिकांश संगठनको अवस्था भ्रदगोल छ । विभिन्न विभाग, संघ र स्थानीय तहमा त संगठन नै निर्माण हुन सकेको छैन । कतिपय भातृ संगठन एक दशकदेखि नेतृत्व विहिन अवस्थामा छन् । पार्टी र संगठनलाई सबैभन्दा क्रियाशिल र मजबुद बनाउने युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, विभिन्न जातिगत संगठनहरुको अवस्था पूर्ण भ्रदगोल र लथालिंग छ ।
कतिपय अधिवेशन भएका संगठनमा पनि गुटगत विवादको कारण संगठनका गतिविधि नै हुन नसक्ने अवस्था पनि निर्माण भएको छ । महिला संघ, मुश्लिम संघ, भूपू सैनिक संघ लगायतमा अधिवेशन त भएको छ तर गुटगत विवादले संगठन तयार हुने र गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था छैन् । अनौठो लाग्दो लोकतान्त्रि अभ्यासको दुहाई दिने कांग्रेसको किसान संघमा विगत १४ वर्षदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन् । आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजमा अधिवेशन नभएको करिब एक दशक नाघेको छ ।
३० वटा विभाग नेतृत्व विहिन छन् । संगठनलाई क्रियाशिल र चुस्त दुरुस्त बनाउने विभाग नै नेतृत्व विहिन हुँदा पनि पार्टी नेतृत्व अलमलमा छ ।
कतिपय जिल्ला संगठन काम चलाउमा चलेका छन् । अधिकांशको पाँच वर्ष भईसक्दा पनि अधिवेशन हुन सकेका छैनन् । जिल्ला संगठन काम चलाउन अवस्थामा रहे पनि अन्य संघीय अन्तर्गतका संगठन भने तयार हुन सकेका छैनन् ।
भए भरका संरचनाहरु भ्रदगोल र लथालिंग अवस्थामा हुँदा कांग्रेस भित्रै र सुभेच्छुकमा पनि एकमदै निराशाको अवस्था निर्माण भएको छ । संगठनको अवस्थाले गर्दा नेताहरु नै वेकामे हुने अवस्थामा पुगेका छन् । संगठन निर्माण र नविकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।
जागरण अभियान नौटंकी मात्रै : भुपेन्द्रजंग शाही
केहि दिनअघि कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीले जागरण अभियानलाई नौटङी भन्दै भण्डाफोर गरेका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर जागरण अभियानको डंका फुक्नु औचित्य नभएको बताएका थिए । शाहीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तरुण दललाई ४ जनामा सीमित राख्नु र नेविसंघलाई शुन्यमा राख्नु लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि लाजमर्दो विषय हो । केन्द्रलाई नै जागरण गर्न नसक्ने पार्टीका नेताहरुले गाउँमा गएर जागरण गर्छु भन्नु नौटङ्की मात्र हो ।’
शाहीले भातृ संगठनलाई भ्रदगोल छाडेर कांग्रेसलाई जागरण अभियानबाट जगाउन नसकिने बताएका थिए । उनले पार्टी नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी शैली अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जागरण अभियानको अष्पष्ट एजेण्डा
कांग्रेसले १५ बुँदे उद्देश्य राखेर १५ दिने दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरेको छ । कांग्रेसले मंगलबारदेखि सुरु गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियानलाई आन्तरिक पार्टी सुद्धिढिकरण, सुद्धिकरण र संगठन विस्तारको अभियानको रुप चित्रित गरेको छ । कांग्रेसले अभियानलाई कम्युनिष्ट सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्ने अवसर पनि भनेको छ । कांग्रेसले जागरण अभियानमार्फत बाइडबडीलगायतका भ्रष्टाचारका काण्डलाई पनि भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ ।
१५ बुँदे उद्देश्य राखेर १५ दिने अभियान थालेको कांग्रेससँग खास ठोस एजेण्डा भने नभएको कतिपयको तर्क छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले संसदभित्रै सरकारको दरिलो विरोध गर्न नसकेको अवस्थाले सरकारको गतिविधिलाई भण्डाफोर गर्ने ल्याकत नराख्ने धेरैको बुझाई छ । भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्नै मुख्य नेतृत्व गण मुछिएको कारण पनि भण्डाफोर गर्ने बुँदा शिर्षक मात्रै भएको बताईन्छ ।
धार्मिक विषयले जागरण अभियान नै भ्रदगोल हुनसक्ने
पहिलो चरणको जागरण अभियानमा गुटगत विवादले निकै चर्को रुप लियो । कतिपय स्थानमा कार्यक्रम नै विथोलिने अवस्थासमेत बन्यो । गुटगट अवस्थाले चरम रुप लिँदा कार्यक्रममै झडप हुने र नेता तथा कार्यकर्ता नै घाईते हुने अवस्थासमेत बन्न पुगेको घटनालाई कांग्रेस नेतृत्वले भने राम्रोसँग समिक्षा गर्न सकेको छैन् । पहिलो अभियानलाई राम्रोसँग समिक्षा नगरी सुरु भएको दोस्रो चरणको अभियानमा भने अहिले धार्मिक मुद्दा घुसेको छ । महासमिति वैठकले हिन्दु राष्ट्र बनाउने विषयमा गरेको निर्णयलाई कांग्रेसको केहि समय अघि बसेको केन्द्रिय समिति बैठकले उल्टाइएदिएको थियो ।
हिन्दु राष्ट्र कि धर्म निरपेक्षता भन्ने विषयमा केहि समयअघि करिब ७ सय महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर मार्फत हिन्दु राष्ट्रलाई एजेण्डा बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए । महासमितिले उठाएको एजेण्डाले कांग्रेसभित्र अहिले निकै माहोल तताएको छ । गत भदौ १३ मा बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको वैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डाबारे निकै चर्को बहस भएको थियो । १४ सय महासमिति सदस्य रहेको कांग्रेसले बहुमतभन्दा बढिले हस्ताक्षरमार्फत नै अगाडि सारेको एजेण्डाले अहिलेको जागरण अभियानपनि निकै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
भदौ २५ गते, २०७६ - १४:५६ मा प्रकाशित